နဖူးရှေ့မှာ ဆံမြိတ်ချထားရင်လှလား ?မလှဘူးလား? စဉ်းစားမိနေရင် ဒီပုံလေးတွေကြည့်လိုက်ပါ – Trend.com.mm
နဖူးရှေ့မှာ ဆံမြိတ်ချထားရင်လှလား ?မလှဘူးလား? စဉ်းစားမိနေရင် ဒီပုံလေးတွေကြည့်လိုက်ပါ
မိန်းကလေးတိုင်းက ဆံပင်စတိုင်လ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ကြိမ်လောက်တော့ဝေခွဲမရဖြစ်မိတယ် ဆိုတာငြင်းစရာမရှိပါဘူး။နဖူးရှေ့မှာ ဆံမြိတ်ချထားရင်လှလား ?မလှဘူးလားဆိုတာမျိုးပေါ့။ ကိုရီးယားမလေးတွေဆိုရင်တော့ နဖူးမှာဆံပင်လေးချထားတာက ချစ်စရာကောင်းပေမဲ့ ဆံပင်အမြိတ်ချထားတာက လူတိုင်းနဲ့မလိုက်ဖက်ပါဘူး။တစ်ချို့ကျတော့ နဖူးပေါ်မှလှတာရှိသလို တစ်ချို့ကျတော့ ဆံစလေး ဟိုကျဒီကျက လှပါတယ်။တစ်ချို့ကျတော့လည်း နဖူးရှေ့ချထားတဲ့ဆံပင်အတိလေးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းကြပါတယ်။အဓိက,ကတော့ မျက်နှာလေး ရှင်းေ်နရင် အလိုလိုကြည့်ကောင်းလှပကြတာပါပဲ။နဖူးမှာ ဆံပင်ချထားရင်တော့ မျက်နှာကိုသေချာမမြင်ရသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒီအချက်က ဟောလိဝုဒ်က နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေအတွက်လည်း အများကြီးသက်ရောက်မှုရှိစေပါတယ်။အောက်မှာပြထားတဲ့နာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေ ရဲ့ ပုံနှစ်ပုံကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဆံမြိတ်ချထားတာနဲ့မချထားတာ ဘယ်ပုံက ပိုကြည့်ကောင်းသလဲဆိုတာ။ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်ကိုကြည့်ပြီး ဆံမြိတ်ချသင့် မချသင့်သေချာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။
မိနြးကလေးတိုငြးက ဆံပငစြတိုငလြနြဲ့ပတသြကပြှီး တစကြှိမလြောကတြော့ဝခှေဲမရဖှစမြိတယြ ဆိုတာငှငြးစရာမရှိပါဘူး။နဖူးမှာဆံမှိတခြထွားရငလြှလား ?မလှဘူးလားဆိုတာမွိုးပေါ့။ ကိုရီးယားမလေးတှဆေိုရငတြော့ နဖူးမှာဆံပငလြေးခထွားတာက ခစွစြရာကောငြးပမေဲ့ ဆံပငအြမှိတခြထွားတာက လူတိုငြးနဲ့မလိုကဖြကပြါဘူး။တစခြွို့ကတွော့ နဖူးပေါမြှလှတာရှိသလို တစခြွို့ကတွော့ ဆံစလေး ဟိုကဒွီကကွ လှပါတယြ။တစခြွို့ကတွော့လညြး နဖူးရှခေ့ထွားတဲ့ဆံပငအြတိလေးနဲ့ခစွဖြို့ကောငြးကှပါတယြ။အဓိက,ကတော့ မကွနြှာလေး ရှငြးနြေရငြ အလိုလိုကှညြ့ကောငြးလှပကှတာပါပဲ။နဖူးမှာ ဆံပငခြထွားရငတြော့ မကွနြှာကိုသခွောမမှငရြသလိုဖှစနြတတေပြါတယြ။
ဒီအခကွကြ ဟောလိဝုဒကြ နာမညကြွောအြနုပညာရှငတြှအတှေကလြညြး အမွားကှီးသကရြောကမြှုရှိစပေါတယြ။အောကမြှာပှထားတဲ့နာမညကြွောအြနုပညာရှငတြှေ ရဲ့ ပုံနှစပြုံကို နှိုငြးယှဉကြှညြ့လိုကပြါ။ ဆံမှိတခြထွားတာနဲ့မခထွားတာ ဘယပြုံက ပိုကှညြ့ကောငြးသလဲဆိုတာ။ပှီးရငတြော့ ကိုယြ့ရဲ့ မကွနြှာသှငပြှငကြိုကှညြ့ပှီး ဆံမှိတခြသွငြ့ မခသွငြ့သခွောစဉြးစားကှညြ့ပေါ့နြော။
ဘိုစာကြိုက်သူလေးတွေအတွက် အရသာရှိတဲ့ Casseroles လုပ်စားကြမယ် !